Store | miaraka amin'ny Visa + Work + CV Serivisy ho an'ny Expatriates
Miasa sy mipetraka any ivelany
Mifidy amin'ny fomba mivelona haingana indrindra eto ambonin'ny tany!
Te hanomboka fiainana tsara kokoa ve ianao?
Ny toerana tsara indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny traikefa amin'ny dia
Store - Orinasa Dubai
Miaraha miasa amin'ny Visa + Work + CV ho an'ny Expats. Safidio azafady ny toerana mety aminao !. Raha manana vahiny an'arivony maro amin'ny fitenenana isika, amin'ny India ary koa Pakistan ary Arabia Saodita. Manolotra serivisy mahatalanjona ho azy rehetra izahay izao. Noho izany, azafady mba jerena ny azon'ny orinasa alàlan'i Dubai City orinasa ho anao. Amin'ny maha mpanatanteraka azy dia mila manana fampahalalana momba ny antsipiriany ianao vao mahazo asa. Na izany aza, ny orinasa City Dubai dia manome torolàlana ho an'ny expats. Eto ambany ny Visa hiarahanay miasa ary mazava ho azy miaraka amin'ny serivisy fiantohana asa.
Manantena izahay fa hifidy ny firenena mety anao ianao. Ao amin'ny lisitry ny lisitra anananao dia hanana toerana ambony eo amin'ny toerana hiainana sy fiasana miaraka amin'ny vahiny ianao. Ohatra, azonao atao ny mifindra any Jordania sy Saudi Arabia, Etazonia ary Fanjakana Mitambatra.
Ahoana ny fampiasana ny Store-tranonay?
Tokony hieritreritra ny firenena tonga lafatra hitoeranao ianao. Ary tokony hifidy ny Visao ianao ary afaka mividy serivisy amin'ny ekipanay. Avy eo amin'ny lafiny tsara, ny ekipanay dia hikarakara ny famerenanao ny fifindranao. Noho izany, tsy maintsy misafidy ianao ary mividy visa avy amin'ny orinasanay. Avy eo ny ekipan'ny manampahaizan'ny Dubai City Company dia manao ny sisa amin'ireo zavatra ilaina mba hanampiana anao ho lasa mpiantsena any Etazonia.
Visa mankany Atsinanana
Visa mankany Moyen Orient miaraka amin'ny orinasam-piaramanidina ao Dubai. Amin'ny ankapobeny dia miteny ianao fa afaka manana safidy hisaina amin'ny iray amin'ny tsara indrindra sy ny firenena be mpitia indrindra any Atsinanana. Ny orinasanay dia manampy ireo mpiasa any ivelany hahazo asa any Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirate Liban ary ary i Palestine aza. Amin'ny ankapobeny dia miteny raha mitady visa ianao amin'ny iray amin'ny firenena malaza indrindra ary iray amin'ny toerana tsara indrindra hiasa ary avelao amin'ny fianakavianao sy ny hevitrao. Afaka manana izany safidy izany ianao miaraka amin'i Dubai mba hahazoana asa.
Asa any Atsinanana! Mifindra toerana anio!
Ka izany, raha mpiasa vahiny ianao ary te-hanararaotra asa tsara any Afovoany Atsinanana. Ny orinasam-panjakanana ao Dubai dia manampy ny olona avy any Pakistan Saudi Arabia. Ankoatra izany, Dubai ary na dia ny firenena vahiny toa an'i Kuwait sy Libanona. Izahay dia manampy ny olona rehetra hiangona sy haka ny asa fitantanana mahazatra sy asa manga. Koa eto izahay hanampy anao betsaka araka izay azonay atao mba hitadiavana asa mahomby amin'ny fikatsahana ny fanomezana Visa ho anao ao amin'ny firenena voafidinao. Azonao atao ny misafidy ny hisafidy amin'ireo firenena manana isa ambony indrindra izay manakarama expat.
Manantena izahay hahita anao any Dubai na Abu Dhabi. Ary ity no firenen-tsika ahazoanay mametraka anao sy hanomezanao Visa anao.
Ny hany mila ataonao dia ny Visa fotsiny. Avy eo ampidiro ao anaty sarety ny visa. Ary manaova fandoavam-bola. Ary avy eo manidina any amin'ny toerana nofidinao. Izay rehetra lasa mpitady asa mahomby.
Izay hafa rehetra mety ilainao (97)
Dubai Souvenir (76)
Fikarohana asa (1)
akanjo muslim (158)
Kitapo sy kitapo fitsangatsanganana (264)
Visa mankany Atsinanana (15)
akanjo miasa (38)